Ciidamo ka mid noqonaya Booliska Hir-Shabeelle oo tababar loo furay * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa magaalada Jowhar ka socota munaasabadda furitaanka Dufcadii labaad ee Ciidanka Booliiska gaarka u ah maamulka Hir-Shabeelle oo gaaraya 200 oo Askari.
Tababarka Ciidamadaas ka mid noqonaya Booliiska Hir-Shabeelle ayaa ka furmay Dugsiga Tababarada Booliiska ee magaalada Jowhar, Mas’uuliyiinta ka qeyb galeysa munaasabadda ayaa waxaa ka mid ahaa Maxadweyne ku-xigeenka maamulka Hir-Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo masuuliyiin kale.
Ciidamadaan maanta loo furayo Tababarka oo ka mid noqonaya Booliiska maamulka Hir-Shabeelle ayaa laga kala keenay degmooyinka gobolka Shabeelleda Dhexe iyo gobolka Hiiraan.
Dufcadii tan ka horeysay oo gaareysay 200 oo Askari ayaa bilowgii sanadkaan waxaa magaalada Jowhar Tababar mudo u socday ugu soo xiray Wasiirka Amniga Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow Duc’aale.